प्याजमा चरम कालोबजारी « Bagmati Page
काठमाडौँ l भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । व्यवसायी संगठित भएरै कृत्रिम अभाव गराइरहेका छन् । भारतले भदौ २९ देखि निर्यात रोकेको थियो । त्यसलगत्तै यहाँ कालोबजारी सुरु भएको हो ।
काठमाडौं । नबिल बैंकका पूर्वअध्यक्ष स्व. शम्भुप्रसाद पौड्यालको सम्झनामा यस वर्षबाट बैंकले कर्मचारी परिवारको लागि
नयाँ वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकको अफरै अफर !
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले विभिन्न ई–कमर्सहरूबाट सामग्रीहरू किनमेल गरी डेबिड तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत
कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छलफल शुरू
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण गृहकार्य अघि बढाएको
तेहेरो अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक, २०९ धितोपत्रको मूल्य उकालो
काठमाडौं । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ । साताको पहिलो
उद्योग संचालनमा तरलता संकटः घाटाको व्यापार गर्दै व्यवसायी
काठमाडौं । नेपालका व्यवसायी विभिन्न कारणले गर्दा संकटको समयमा पनि उद्योग संचालन गर्न बाध्य छन्
रुद्रेश्वर सामुदायिक क्रियापुत्री भवन उद्घाटन (फाेटाेमा हेराैं)
काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ को रुद्रेश्वर सामुदायिक क्रियापुत्री भवन उद्घाटन गरिएको छ । बूढानीलण्ठ नगरप्रमुख
फिक्कलका ४० जना जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण
काठमाडौं । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका वडा नं. ३ का ४० जना जेष्ठ नागरिक तथा ५
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू